Fikarohan-kevitra ny amin’ ny “Anton’ ny Mahatonga Fahoriana amin’ ny Mpanompon’ Andriamanitra” , no novoaboasan’ ny Mpanoratra .
Marina ve ny “Tantara” ambaran’ ity Boky ity ? Mampiteraka adi-hevitra be dia be ny famaliana izany Fanontaniana izany . Raha izany, dia azo raisina ho “Tantara Marina” ve izy ity, sa dia “Fanoharana” fotsiny ihany ? .Ny Jiosy fahiny dia nihevitra azy ho “Tena Tantara Marina” . Ny sasany taty aoriana kokoa indray , dia “Nisalasala Be” ihany , satria nisy zava-dehibe nofonosin’ ny tantara nampanahirana ny sain’ izy ireny .Fa nisy sokajin’ olona fahatelo , nihevitra fa “Tsy nisy izany olona natao hoe JOBA izany , fa Tsangan’ Olona ihany” . Tetsy ankilan’ ireo rehetra ireo , dia nanizingizina kosa Martin Lotera , fa “Tena nisy tokoa Lehilahy natao hoe JOBA , ary ny zavatra lazaina ny aminy dia nalahatra araka ny fomba Poetika” .
Marihina tsara eto , fa “Anisan’ ny Literatiora tsara indrindra amin’ ny bokin’ ny Hebreo ny Bokin’ i Joba”. T.H. Robinson , Teolojiana Anglisy , ao amin’ny lahatsoratra nataony , dia nilaza fa “Raha misy fanaovana Lisitra ny Boky tsara indrindra eto amin’izao tontolo izao , dia ny an ‘ i Joba no anisan ‘ ny tsara indrindra , ary raha tsy izany aza , dia ny Tena Tsara indrindra”. Ary Victor Hugo, Mpanoratra Frantsay , dia nilaza fa “Ny Bokin i Joba no Boky Ambony indrindra tamin’ izay vitan’ olombelona” .
Raha ny amin’ny Fahamarinan’ ny Boky , dia tsy hiditra lalina amin’ ny famakafakana izany isika , fa ny tiantsika ambara kosa dia izao :
- Nisy olona iray nampitolagaga ny mpiara-belona taminy teo amin’ny fahitana ny toetrany sy ny fombam-pivavahany . Saingy lehilahy nianjadian-pahoriana mafy teo amin’ny fiainany . Izany hoe niharam-pahavoazana tsy takatry ny saina hoeritreretina .
- Araka ny hevitro manokana , raha tsy marina tsinona izao tantara izao fa anganongano ihany , ka tsy aleo ve miteny tsotra hoe : “tsy tokony hoheverina akory ity Boky ity” .